Kuyamwisa kwakakosha	Thursday, 24 May 2012 06:44	View Comments
naElsie MojapeloZVINHU zvinozivikanwa kuti mukaka
waamai wakakosha kuupenyu hwemwana. Zvinokurudzirwa kuti kwemwedzi mitanhatu yekutanga yeupenyu hwemwana ange achipihwa mukaka waamai chete. Izvi zvinowedzera mukana wekurarama upenyu husina zvirwere zvakawanda.Mukaka unenge uine zvese kusanganisira mvura naizvozvo hazvitombokurudzirwa kupa mwana apihwe mvura. Chimwe chikafu chinokurudzirwa kuzopihwa mushure memwedzi mitanhatu iyi. Mwana anofanirwa kuiswa pazamu achangozvarwa. Izvi zvinobatsira kuti mukaka utange kugadzirwa zvakanyanya. Mukaka wekutanga, uya unonzi “colostrums”, ndiwo wakanyanyokosha nekuti unobatsira kudzivirira mwana kuzvirwere. Unovaka masoja emuviri.
Madzimai anoda kudzidziswa kuisa mwana pazamu nenzira kwayo nekuti vamwe madzimai vanoona kunge mwana asisiri kuda kuyamwa kana kuti mukaka usiri kubuda izvo kwete. Mwana haafanirwi kupihwa mukaka nenguva asi kuti anofanirwa kuyamwiswa mukaka paanouda. Zvakakoshawo kuti amai vanoyamwisa vachengetedzewo utano hwavo vachiwaniswa chikafu chakakodzera kuti vavewo nemukaka wakakwanira mwana. Vanofanirawo kudya chikafu:l Chine ma “protein”l Nzungu nenyimo
l Mukakal Tea ine mukakaNguva yekuyamwisa yakakosherawo vose, amai nemwana, inovapa mukana wekuvaka hukama hwakakomba.-Kwayedza